दाइजो दिने पैसाले छोरी पढाउनोस् राम्रा–राम्रा केटा आफै आउछन्: डा. नाज सिंह - Naya Online
शनिबार, चैत्र ८, २०७६ (March 21st, 2020 at 2:27pm ) अन्तर्वार्ता, प्रवास, बिजनेस, साहित्य
डा. नाज सिंह कवि तथा व्यावसायी हुन् । नेपालको सिराहामा जन्मिएकी सिंहको रसियामा व्यावसाय छ । २० वर्षदेखि रसिया बस्दै आइरहेकी सिंहको “तिर्खा “नामक कविता संग्रह केहि समयअघि सार्वजनिक भएको थियो । उनिसँग नयाँ अनलाइनले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
केहि हप्ता अघि आएको थिएँ ।
पढाइ एकातिर पेशा अर्कातिर हुँदा पढाइसँग सम्बन्धित काम गर्न पाएको भए, भन्ने लाग्दैन ?
लाग्दैन, आफ्नो काममा व्यस्त र सन्तुष्ट छु ।
तपाईको कविता संग्रह “तिर्खा “कस्तो तिर्खा हो ?
मान्छेभित्र अनेकन तिर्खाहरू हुन्छन् । मान्छेभित्र रहेको चाहानाहरू नै “तिर्खा” हुन् । तिर्खा असिमित हुन्छ । तिर्खाउदा तिर्खाउदै मान्छेको जीवन समाप्त हुन्छ । र, हिन्दुधर्ममा दाहसंस्कारपछि अस्तुलाई पानीमा सेलाउने चलन छ, त्यसको मतलब मान्छे बाँचुन्जेल पनि तृषित हुन्छ र त मरेर जाँदा पानीमा सेलाइन्छ ।
तिर्खाको पनि कुनै न कुनै पाटो त होला नि ?
तिर्खाएर मान्छेको जीवन सकिन्छ, यहि पाटो भन्ने छैन ।
सन्तुष्ट नभएको आफ्नो जीवनको कुनै पक्ष छन् ? जसलाई यस कविता संग्रहमा भेट्न सकिन्छ ।
किटेर यहि हो भन्न सक्तिन तर कहिँकतै हुन्छ । कति त मलाई केको तिर्खा छ भन्ने आफूलाई नै थाहा हुँदैन ।
तपाइँका कविता पढ्दा प्रेमको तिर्खा हो कि जस्तो लाग्छ नि ?
प्रेममात्रै हैन मान्छेको जीवनमा धेरै किसिमको तिर्खा हुन्छन् । वास्तविक जीवनमा मैले प्रेम पाएको छु ।
तिर्खा कविता संग्रहमा ३ वटा भाषामा कविता लेख्नुभएको रहेछ, यसको उदेश्य के थियो ?
खास उदेश्य त केहि थिएन । म हिन्दी, नेपाली, मैथिली,अंग्रेजी र रसियन ५ वटा भाषामा लेख्न सक्छु । जुन भाषामा लेख्ने सोच आयो त्यहि भाषामा लेख्छु । तर २ वटा भाषा चाहिँ यस संग्रहमा समेटिन ।
कविता लेख्नु, मनमा आएका कुराहरू लेख्नु हो ?
को केबाट प्रभावित भएर लेख्छ ? त्यो व्यक्तिगत कुरा हो । मेरो हकमा फस्ट फिलिङ्स जे आउछ त्यसलाई नै म कविताको रुप दिन्छु । पुनः सम्पादन पनि गर्दिन । तिर्खा संग्रह त्यति धेरै सम्पादन गरेको छैन ।
सम्पादन नगर्दा त्रुटि हुनेरैछ जस्तो लाग्दैन ?
भाषामा त्रुटिहरू होलान् तर म सन्तुष्ट छु ।
सहित्यप्रतिको रुचि कसरी जाग्यो ?
म कक्षा ८ मा पढ्दा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको कविता पढेंको थिएँ त्यसले एकदमै मन छोयो र लेख्न पनि मन लाग्यो । त्यसपछि लेख्न सुरु गरेँ तर कापीमै थन्किए । २०५१ सालमा कविता संग्रह निकाल्न तयार गरिसकेको थिएँ त्यत्तिबेलै एमबिबिएस पढ्नका लागि रसिया जानुपर्ने भयो । रसियामा पढाइ र पारिवारिक जीवन संगसंगै सुरु भयो । त्यसपछि २० वर्ष त लेखन बन्द भयो । मनमा कविता आउथ्यो फेरी जान्थ्यो । कहिलेकाहिँ साहित्यक कार्यक्रममा पुराना कविताहरू सुनाउने गर्थे । २० वर्षपछि भने फेरी सुरु गरेँको छु । कविता संग्रह निकाल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र संग्रह निकाले ।
संग्रहमा छन्द र गद्य दुवै प्रकारका कविताहरू रैछन् नि ?
म लक्ष्मिप्रसाद देवकोटाको कविताबाट प्रभावित भइ कविता लेख्न सुरु गरेको हुँ । त्यतिबेला वहाँकै कविताको ढाँचामा लेखेको थिएँ । पछिल्लो समय गद्यमा लेख्न सुरु गरेको छु । त्यसैले दुवै छन् ।
आदिकवि भानुभक्तलाई सम्बोधन गरेर पनि कविता लेख्नुभएको रहेछ ?
हजुर मैले त्यो कविता मस्कोमा लेखेको हो । मस्कोमा भानुजयन्तिको अवसरमा कविता प्रतियोगितिा कार्यक्रम राखिएको थियो । यो शिर्षकमा पनि मेरो आफ्नो थिएन, दिइएको थियो । हामीले कविता लेख्यौं । प्रतियोगितामा मेरो कविता दोस्रो थियो ।
रसियन साहित्य विश्व हल्लाउने साहित्य हो, त्यहाँ बसेर लेखिरहनुभएको छ, यी दुई देशको साहित्यलाई अध्ययन गर्दा नेपाली साहित्य कस्तो पाउनुहुन्छ ?
नेपाली साहित्य मेरो मनमा बसेको साहित्य हो । जहाँ गएपनि म नेपाली साहित्य नै मनपराउँछु । रसियन कवि पुस्किनको कविताहरू अत्यन्तै राम्रा छन् । मैले पनि रसियनमा लेख्न कोसिस गरेको छु । अझैँपनि म रसियन साहित्यमा भिज्न भने सकिन ।
रसियामा नेपाली साहित्यबारे केकस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् ?
जतिपनि साहित्यमा रुचि राख्ने नेपालीहरू हुनुन्छ, वहाँहरुबाट साहित्यक गतिविधि भइनैरहेकै छ । साहित्य संस्थाहरू छन् । म आफू चाहिँ संस्थाहरुमा आवद्ध छैन । कार्यक्रमहरुमा भने जाने गरेको छु ।
तराई समुदायबाट हुनुहुन्छ, एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको हिसाबले तराईमा व्यप्त रहेको दाइजो प्रथालाई कसरी लिनुभएको छ ?
दाइजो प्रथा हटाउन सकिन्छ तर जुलुस निकालेर हैन । यदि दाइजो प्रथा हटाउनु छ भने दाइजो दिने पैसाले छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ । छोरी शिक्षित भए दाइजो दिनुपर्दैन । ऊ सक्षम छ, आफ्नो खुट्टामा उभिएको छ भने को आउछ उसलाई दाइजो माग्न ? यदि उसकै बराबरीको केटा माग्न आएमा उसलाई किन दाइजो दिनुपर्‍यो ? तर छोरीलाई पढाउदैनन् अनि त्यहि छोरीको लागि केटा खोज्छन् पढेलेखेका, डाक्टर, इन्जिनियर । तब ५/१० लाख दाइजो दिन्छन् किनकी छोरी कम पढेको छ । दाइजोले बराबरी बनाउ खोज्नु भन्दा पनि त्यो दाइजो दिने पैसाले छोरी पढाउनोस् भन्छु म । केटा खोज्नै पर्दैन, आफै राम्रा–राम्रा केटाहरू माग्न आउँछन् ।
तराई समुदायका छोराहरू जति धेरै पढ्यो, त्यत्ति डिमाण्ड बढ्यो भन्छन् नि ?
मान्छेलाई सामान जसरी डिमान्ड राख्न नहुने हो । पढेलेखेको केटाहरुलाई पढेलेखेकै केटी खोज्नोस् भन्छु म । केटाको बुबाआमाले छोरा डाक्टर पढ्दा लाखौंं पैसा खर्च भएको छ भन्दैमा त्यत्तिनै दाइजो खोज्नु त उचित भएन । छोरा सन्तान हो सामान हैन ।
दाइजो सम्बन्धि अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ ?
अहिले पहिला भन्दा बेटर छ । हुन त मेरो विवाहमा पनि दाइजो दिइएको थिएन । छोराहरुको विवाहमा पनि बुबाले दाइजो लिनुभएन ।
आगामी योजना केहि छन् कि ?
अब म साहित्यलाई समय दिन चाहान्छु ।